सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीवाट राजिनामा, त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशकै मोडलको प्रयोग ! – Sapana Sanjal
May 9, 2021 103
सोमवार दिउँसो संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदै छन् । तर यस अघि राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जित्न नसक्ने देखिन्छ । संसदको अंक गणितले उहाँलाई विश्वासको मत मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले ओली राजीनामा दिने पक्का भएको हो ।
जनआस्थाले लेखेको समाचार अनुसार स्रोत भन्छ ‘भोलि विश्वासको मत नपाएपछि लगत्तै शीतल निवास पुगेर राजीनामा दिनेछन् । अनि राष्ट्रपतिले पनि त्यहिँ अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएको घोषणा गर्नेछन् । भोलि साँझदेखि सम्भवतः उनी ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली तथा उनको टोली लुम्बिनी मोडललाई अझ परिकृष्त ढंगले प्रयोग गर्ने धुनमा लागेको स्पष्ट छ । त्यहाँ बिहान ७ बजे राजीनामा दिँदै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिउँसो १ बजे बोलाइएको हाउस अन्त्य गरेर राती मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र सपथ भएको थियो । शपथ गराउन प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीको निवासनै पुग्न परेको थियो । प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुग्दा सांसदहरुले गरेको अवरोधका कारण प्रहरी समेत परिचालन गरिएको थियो ।
Prevपार्टी फुटाउन ठिक्क परेका ओली र नेपाललाई कसले पठायो यस्तो एसएमएस ?
प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७१ सांसद छन् तर ओली र देउवाले कहाँ बाट पुर्याए ३०२ सांसद ?